Wararka – Page 11 – UPD – Midowga Nabadda & Horumarka
Wafdiga ka socda Xisbiga UPD, kuna sii jeeda Baladweyn oo goor dhoweyd ka ambabaxay Muqdisho
Wafdi ka socda xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka oo uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga mudane Hassan Sheikh Mohamudayaa goor dhow ka ambabaxay garoonka diyaaradaha Aden Ade ee magaalada Muqdisho, ayagoo kusii jeeda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Xisbiga UPD oo si adag u cambaareeyay qaraxii ay shacabka ku la’deen ee maanta ka dhacay Muqdisho
February 4, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka isagoo aad uga xun, ugana murugeysan dhibaatadii maanta Isniin 4-2-2019 shacabkii Soomaaliyeed kasoo gaartay qarixii ka dhacay degmada Xamar Weyne ayaa wuxuu cambaareynayaa masiibadaasi loo maleegay shacabkaa Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan.
Guddiyada KMG ah ee aqoonyahanka iyo dhallinyarada xisbiga UPD oo kulan yeeshay
February 1, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Waxaa maanta Jimco 1-2-2019 xarunta labaad ee xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka kulan ku yeeshay guddiyada KMG ah ee aqoonyahanka iyo dhallinyarada xisbiga oo ku howlan diyaarinta doorashada hogaanada madasha aqoonyahanka xisbiga iyo garabka dhallinyarada.
Xisbiga UPD oo Warsaxaafadeed kasoo saaray shirka Batroolka ee London
January 31, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka ayaa war saxaafadeed ka soo saaray shirka lagu wado inuu ka dhaco magaalada London 07 Febraayo 2019 oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Batroolka Soomaaliya.
Hogaanka Xisbiga UPD oo dhallinyaro cusub kusoo dhaweeyay xarunta Xisbiga
January 30, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Gelinkii dambe ee maanta 30-1-2019 ayaa waxaa mar kale xarunta dhexe ee xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka soo dhaweyn loogu sameeyay dhallinyaro gaarayay in ka badan 50 xubnood oo isugu jiray wiilal iyo gabdho.
Wafdigii Xisbiga UPD ee ka qeyb galay Caleemo Saarkii Madaxweynaha Puntland oo dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho
January 28, 2019	 0 Comments by UPD Party	in News
Wafdigii xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka ee ka qeyb galay Caleemo Saarkii madaxweynaha Puntland mudane Saciid C/llaahi Deni ayaa goor dhoweyd dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.